सरकार यस्तो हेरेर बस्न मिल्छ ?
दुई तिहाईको ऐतिहासिक सरकारले मधेश नयाँ देश, मधेश नेपाल होइन भनेर यसरी खुलेआम नारा लगाएको हेरेर बस्न सक्छ ? इतिहासको कुनै कालखण्डमा पनि यसरी देश टुक्य्राउने कुरा सुनिएको थिएन । यही सरकारको पालामा यसरी नारा बिखण्डनको आगो बालियो किन ? स्मरणरहोस्, सबै कुरा सहिन्छ, सहन पनि सकिन्छ, तर देशै टक्य्राउने कुरा न नागरिकले सहनसक्छन्, नसरकारले नै सहनु हुन्छ । संविधान छ, संविधानअनुसार सरकार कडा हुनुपर्‍यो । आइन्दा देशमाथि यस्तो घातक आवाज कसैले पनि उठाउन नसकोस् ।
२ नम्बर प्रदेश सरकार छ, केन्द्रमा संघीय सरकार छ । सुरक्षा निकाय, प्रशासन र संचेतन नागरिक पनि छन् । फेरि बिखण्डनका आवाज कसरी उठ्न पायो बेलैमा सरकारले सूचना पाउनुपर्छ, यस्ता क्रियाकलापमाथि सख्ती हुनैपर्छ, अन्यथा नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि पहिरो जानसक्छ ।
यो सामान्य घटनाक्रम होइन । सरकार र नागरिक समाजले यस्ता क्रियाकलापमाथि कडा रुख अपनाउनुपर्ने हो, सीके राउतले आफ्नो दावी पेश गरे, तत्काल भूमिगत भएका छन् । भूमिगत भएका सीके राउतलाई सरकारले कहाँ खोज्छ अव ? हुनसक्छ, सीमापारी पो गएर सुरक्षित भएका छन् कि ?
वास्तवमा अरिंगाल जसरी यस्ता क्रियाकलापमाथि जाइलाग्नुपर्ने हो । सामान्य विरोध, प्रतिवाद, असन्तुष्टि देख्ने सरकारले देश टुक्य्राउने यस्ता साजिस देखेको छैन भन्न सकिन्न । देश छ, हामी सबै छौं, राजनीति पनि छ । देशै नरहे राजनीति गर्ने कता ? देशद्रोही जोसुकै होस्, त्यस्तालाई नदेख्ने सरकार कमजोर मानिन्छ, दुई तिहाईको सरकारको पालामा बिखण्डनको प्रयत्न ? यो त अति हो । यतिसम्मको राष्ट्रघात सहने सरकारको देशभक्ति प्रश्नचिन्हमा हुन्छ, चेतना रहोस् ।
मधेश नेपालको प्रदेश हो । मधेश अलग देश होइन । संविधान मान्ने, झण्डा फरफराएर कालो संविधान भन्दै नारावाजी गर्न हिड्ने तस्वीर मधेशमै देखियो । संविधान नमान्ने, मधेश अर्कै देश भन्ने पर्चा, ब्यानर पनि मधेशमै देखियो । मधेशको सम्बन्ध र सम्पर्क काठमाडौंभन्दा बढी पटनातिर पनि देखियो । संविधानमा चित्त दुखाई हुनसक्छ, फरक मत पनि राख्न सकिन्छ, सहमति जनाउन पाइन्छ, नेपाल राष्ट्रप्रति असहमत हुने छुट कसैलाई पनि छैन, हुनु पनि हुन्न । मधेश यसरी जलिरह्यो, नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हमला भइरह्यो र दुई तिहाईको सरकार हेरिह्यो भने यो त रोम जलरह्यो, निरो बाजा बजाइरहे भनेजस्तो भयो । यस्तो दुर्भाग्य र दुर्दिन आइन्दा देख्नु नपरोस्, सरकार सरकारजस्तो होस् ।
२ नम्बर प्रदेशमा सरकार छ कि छैन । छ भने त्यो सरकार नेपाल सरकार हो कि होइन ? हो भने नेपालको संविधानअनुसारको सीमामा चल्नुपर्छ । संविधान नमान्नेले पनि संविधानको विरोध गर्नुपर्छ, देशको होइन । सत्तामा बसेर देशको त के संविधानको विरोध गर्ने छुट पनि कसैलाई छैन । असोज ३ गते मधेशमा जे देखियो, नेपालको इतिहासमै यो कालो दिन हो । कालो संविधान भन्ने सत्ताधारी र मधेश नेपाल होइन भन्ने सीके राउत र तिनका छौंडाहरु विरुद्ध नेपाल सरकारले कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ र त्यस दिन यो सब तमासा हेर्ने त्यस क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षा निकाय, प्रशासन चलाउने सबैमाथि एक्सन हुनुपर्छ ।